ဗာတီကန်ဆက်သွယ်ရေးသတင်းဌါန၏အကြီးအကဲဖြစ်သူ Paolo Ruffini မှ ကက်သလစ် သတင်းသမားများအား ကက်သလစ်မီဒီယာအနေဖြင့် အသင်းတော်ကြီး အတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ အထူးသဖြင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုရိုနာကပ်ဘေးကြုံနေချိန် များအတွင်း တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊အဖွဲ့ အစည်းချင်းဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံလိုက်ဖြစ်စေ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုရှိစေရေးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
“ကက်သလစ်သတင်းဆက်သွယ်ရေးဌါနဟာ အသင်းတော်ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သတင်း တွေ တင်ပြ၊ ဖလှယ်ရုံ ပဲမဟုတ်ရပါဘူး၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုတည်ဆောက်လာစေဖို့ တွန်းအားပေးနိုင်ရပါမယ်။ ကက်သလစ်ဆိုတာ ခန္ဓာတစ်ခုတည်းအဖြစ်စည်းလုံးမှုရှိကြ တာပါ။ကက်သလစ်ဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာရဲ့တင်ဆက်မှုတွေဟာလည်းတခြားသတင်း မီဒီယာများနဲ့ကွာခြားရမယ်၊ လူသားကယ်တင်ခြင်းရကြစေမယ့်အကြောင်းအရာ တွေကို ဖြန့်ဝေဖို့အာရုံစိုက်ကြရမယ်၊ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ကက်သလစ် အနှစ်သာရ ဖြစ်တဲ့ တစ်လုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတာကိုလည်း အသက်ဝင်အောင်လုပ်ဆောင်ကြရမယ့် ဝတ္တရားရှိကြပါတယ်။ လူတွေ၊အဖြစ်အပျက်တွေ၊အမှတ်ရစရာတွေကိုမှန်ကန်စွာမှတ်တမ်းတင်ချိတ်ဆက်ပေး ဖို့က ဆက်သွယ်ရေးသမားတွေရဲ့တာဝန်ပဲ။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်း သက်သေခံဖော်ပြကြပါ၊ ပဋိပက္ခတွေကိုကျော်လွှားနိုင်စေ မယ့် ပေါင်းကူးတံတား တွေဆောက်တည်ကြပါ။
လက်ရှိကပ်ရောဂါကြောင့် လူတွေဟာ သီးခြားနေထိုင်မှုအတွေ့အကြုံရနေကြပြီ၊ ဘုရားကျောင်းတွေတောင်မှ တစ်ယောက်ချင်း တစ်သီးတခြားရှိကြရတဲ့ စနစ်ကြောင့် ခရစ်ယာန်ပေါင်းစည်းမှုဆက်ဆံရေး သဘောကို လျော့ပါးသွားစေနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ကြုံနေရပြီဖြစ်တယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆီကိုယိမ်းယိုင်လာနေတာကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ စိန်ပီတာရဲ့ရိုးသား နှိမ့်ချမှုကိုစံပြုအားယူကြဖို့လိုပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ကက်သလစ်သတင်း သမားဆိုတာ ရိုးဖြောင့်ခြင်း၊ မာနစိတ်မရှိခြင်း၊အပြန်အလှန်အကူအညီအပေးအယူ စိတ်ရှိခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်စိတ်ဓါတ်ရှိကြရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာယုံကြည်ချက် ရှိရင် နည်းလမ်း၊အရင်းအမြစ်တွေလည်းတွေ့ရှိကြမှာပါ” ဟု Ruffini က ဇွန် ၃၀-ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကက်သလစ်ဆက်သွယ်ရေးသတင်းဌါနမှကြီးမှူးကျင်းပ သည့် ရုပ်သံဆွေးနွေးပွဲ တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤအစီအစဉ်သည် ကက်သလစ်သတင်းသမားများ၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းပညာရှင် များကို စုစည်းတွေ့ဆုံပေးကာ ဇွန်၃၀-မှ ဇူလိုင် ၂-ရက်နေ့တိုင်အောင် ဖန်သားပြင် ရုပ်သံဖြင့် မီဒီယာ နှီးနှောဖလှယ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Ruffini နှင့်အတူ ဗာတီကန်၏ ဆက်သွယ်ရေးရုံးဆိုင်ရာအတွင်းရေးမှူးရုံးအဖွဲ့ဝင် Natasa Goveka ၊ ရဟန်းမင်းကြီးရုံးတော်ဆိုင်ရာ ရိုးရာဓလေ့များကောင်စီအတွင်းရေးမှူး ဆရာတော်ကြီး Paul Tighe တို့ပါဝင်ဟောပြော ပို့ချခဲ့ကြရာ Natasa Goveka မှ ဗာတီကန်ဆက်သွယ်ရေးယန္တရား၏ ပင်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှု ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာပေါ်တွင်လည်းကောင်း ၊ Bishop Paul Tighe သည် သူ၏ရုံးတော်မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရိုးရာဓလေ့များအကြားအပြန်အလှန် နှီးနှောဖလှယ်ခြင်း၌ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုလည်းကောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားသည်။
ယခုကဲ့သို့ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့နေရချိန်မျိုးတွင်သာသနာ နယ် Dioceses များမှဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဌများ၌မည်သို့ပါဝင်ကြမည်နည်း ဟူ၍လည်း ဤရုပ်သံဆွေးနွေး ပွဲတွင်ပါဝင်သောသူများထံမှမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။
ဆရာတော်ကြီး Tighe ကမူ သာသနာနယ် အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှု၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ကြရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အခမဲ့သင်ကြားဆွေးနွေးပေးသောဤရုပ်သံဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်တွင်ချိတ်ဆက်ပါဝင်သူ ပေါင်း၂၅၀ ရှိခဲ့သည်။
ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်မှလည်း ကက်သလစ်သတင်းဌါနတာဝန်ရှိသူများထံသို့ တောင်းဆိုသည့် အနေနှင့် “ကက်သလစ်သတင်းသမားများသည် လူတို့ကြားတွင် အတားအဆီးဖြစ်စေသောအရာများ၊နားလည်မှုလွဲမှားစေသောအရာများကိုဖယ်ရှားရန် အကူအညီဖြစ်စေကြပါ၊ လူတစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး ကြား၌ဖြစ်စေ၊အဖွဲ့အစည်းများကြား၌ ဖြစ်စေ ရိုးဖြောင့်သောတင်ပြမှုနှင့် မှန်ကန်သော ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး ပြုလုပ် ပေးသည့် ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ်၊ အကာအကွယ်ကောင်းသဖွယ် ဖြစ်စေရန် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သော မီဒီယာမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်နေပါသည်။
အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သူများကို အမှားအမှန်၊အဆိုးအကောင်း ခွဲခြားနိုင်စေရန်၊ ကိစ္စရပ်များကို တည့်မတ်မှန်ကန်စွာကြည့်မြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန်၊တရားမျှတခြင်း၏ အရေးကြီးမှုကိုနားလည်လျက် ၎င်းအတွက်ပါဝင်လုပ်ဆောင်လာစေရန်၊လူမှု ဆက်ဆံ ရေးတွင်သင့်မြတ်စေရန်၊ဘုံကမ္ဘာမြေအိမ်အရေးကို လေးစားဂရုပြုတတ်စေရန်စသည့် အရာများတွင် အကူအညီဖြစ်စေမည့် မီဒီယာမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်နေပါသည်။
အထက်ဆိုခဲ့သောအချက်များကို လွဲချော်တိမ်းစောင်းသွားစေရန်ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင် သော မီဒီယာများရန်မှကာကွယ်ပေးမည့်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားသတင်းဆက်သွယ်ရေး သမားကို ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်နေပါသည်” ဟုရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။
"Pictured in this composite photo are Bishop Paul Tighe, adjunct secretary of the Pontifical Council for Culture; Paolo Ruffini, head of the Vatican Dicastery for Communication; and Natasa Govekar, director of the theological-pastoral department of the Vatican's Secretariat for Communication. The three were speakers for the June 30, 2020, opening panel of the Catholic Media Virtual Conference. (Credit: CNS photo/images by Robert Duncan, Paul Haring.)"